Sinaina vita amin'ny vinaingitra vita amin'ny peratra China ho an'ny sakafo fonosana sy ny orinasa mpamokatra vovoka formula_milk | Byland
Voahangy voasinton'ny peratra ho an'ny sakafo fonosana sy vovoka formula_milk
Ny Nins Tins dia fonosana tonga lafatra ho an'ny vovo-dronono, cashew, mixes, voanjo ary maro hafa. Mampitombo ny ain'ny talantalana sy ny fiatraikany eo amin'ny talantalana ny vata fandrahoana sakafo sy ny vata fandrombahana hermetika. Ny boaty haingon-trano manokana dia fonosana fampiroboroboana ho fanekena marika.
Kitondro vovo-sakafo mahavelona - Seamika Hermetika sy mihidy
Amin'ny alalàn'ny tany dia afaka manolotra tahiry sy vata fampangatsiahana ho an'ny sakafo mahavelona miaraka amin'ny fanidiana isan-karazany izay mitahiry ny maha-vaovao. Ny fonosam-pandrefesana metaly haingon-trano dia manome fomba haingon-trano hanidiana indray ny lata rehefa tapaka ny tombo-kase hermetika. Izany dia manampy amin'ny fanangonana ny kapoaka. Ho fanampin'ny kapoaka hermetika, dia manamboatra tiny fanomezana voahidy voahidy miaraka amina valin-kazo maromaro ho an'ny vovo-tsakafo, voanjo, confection. Ny vilia fandrakofana sy fonony dia azo atao pirinty amin'ny sary na marika manana mari-pankasitrahana.
Cans Stocks ary tapitra ny atolotra:
5-1 / 8 "x 3-11 / 16", afaka misokatra ambony, tsy misy vakana, tsotra ny ao anatiny, misy lacquered ivelany, faran'ny fantsom-batana ary seam amina sisiny, feno 108 isaky ny boaty
5-1 / 8 "x 3-11 / 16", afaka misokatra ambony, tsy misy vakana, firaka tsotra na misy lacquered, faran'ny Peel Off ary seam amina sisiny, feno 108 isaky ny baoritra
6-3 / 16 "x 3", can be beaded, plastika tin ao anatiny, lacquered ivelany, plug foil end and welded lafiny seam, feno 108 / baoritra
6-3 / 16 "x 3", can beaded be, tin tsotra na lacquered, Peel Off end ary seam welded lafiny, feno 686 / tray
6-3 / 16 "x 4", can be beaded, tsotra ao anatiny, lacquered ivelany, plug foil end and welded lafiny seam, feno 84 / baoritra, 539 / tray
6-3 / 16 "x 5", can beaded, tsotra ao anatiny, lacquered ivelany, plug foil end and welded lafiny seam, feno 441 / tray
6-3 / 16 "x 5", can beaded, tsotra any anaty, misy lacquered ety ivelany, faran'ny Peel Off ary lasitra amina sisiny, feno 441 / lovia
Faran'ny 502 sy 603 amidin'ny paleta
Previous: Boaty tinplate vy ho an'ny fonosana cookies-Biscuit-Egg Roll_tin boaty
Manaraka: Vata vita amin'ny Tin ary efajoro mahitsizoro ho an'ny fonosana fanomezana
100ml-250ml-500ml-1L-3L menaka fandrahoan-tsakafo camellia se ...
Telo vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy 3 ho an'ny fonosana fisotro ...
Tinplate afaka amin'ny aluminium EOE voaisy tombo-kase ho an'ny fonosana ...